कम्पनीले सार्वजनिक गरेको चालू आव २०७५/७६ को दोस्रो त्रैमासको एनएफआरएस वित्तीय विवरणअनुसार वितरणयोग्य नाफा रू. १ अर्ब २६ करोड छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १ सय २० प्रतिशत बढी हो । गत आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा रू. ५७ करोड १७ लाख थियो । चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफामा वृद्धि भएकाले नाफा बढेको हो ।
कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब ८३ करोड छ भने रिजर्भ कोषमा रू. ४ अर्ब ४१ करोड छुट्याएको छ । साथै, कम्पनीले माघ १३ गतेदेखि ४० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गरिरहेको छ । १६ लाख कित्ता सर्वसाधारणका लागि र ८० हजार कित्ता म्युचुअल फन्डको निष्कासन विक्री खुला भएको हो । बाँकी २४ लाख कित्ता बैंकले अन्य संघसंस्था तथा कम्पनीलाई विक्री गर्नेछ । ऋणपत्र १० प्रतिशत ब्याजदरमा २०८५/८६ मा परिपक्व हुनेछ । आवेदकले ऋणपत्र खरीदका लागि न्यूनतम २५ कित्ता र अधिकतम २० लाख कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्छन् । ऋणपत्र निष्कासन बन्द मिति छिटोमा माघ १६ र ढिलोमा फागुन १३ गते रहेको छ ।
2019-01-30 - 201 view(s) - abhiyan